Xbacklight: Isixhobo sokuhlengahlengisa ukukhanya kwescreen | Ubunlog
Ukulungisa ukukhanya kwesikrini kunye neXbacklight
IPablinux | | Linux, software, Ubuntu
Xbacklight sisixhobo esincinci esivumela lungelelanisa ukukhanya kwesikrini sethu kuhamba ikhonsoli usebenzisa umyalelo:
Ukuba sifuna umzekelo tshintsha ukukhanya kwesikrini ukusuka kwikhulu ukuya kumashumi asibhozo eepesenti kufuneka siphumeze:
Singanyusa kwaye sinciphise ipesenti yokuqaqamba ngaphandle kokukhathazeka ngepesenti ngqo ekuyo. Masithi ngokomzekelo sifuna ukwandisa ukukhanya kwesikrini ngepesenti ezilishumi, koku sisebenzisa ukhetho
Kwaye ukunciphisa, ukhetho
Oku kunomdla kakhulu ukuba sifuna ukwenza iindlela ezimfutshane zokucofa e si vumela yandisa kwaye yehlise inqanaba lokuqaqamba kwescreen ukuze singangeni kumyalelo kwi-terminal ngalo lonke ixesha sifuna ukwenza uhlengahlengiso.
I-Xbacklight inokufakwa ngokulula kwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu ngokusebenza kwikhonsoli:
Yongeza kwaye unciphise ukuqaqamba kwelaptop yam
Yongeza okanye unciphise ukukhanya kwilaptop okwangoku kulula kakhulu. Kodwa ukuba unale ntandabuzo, mhlawumbi kungenxa yenqaku elilandelayo, apho ndiza kuthetha ngendlela yokwenza ngekhibhodi, ayisebenzi kwimeko yakho. Kwinqaku elilandelayo ndiza kuchaza yonke into eyimfuneko ukuze uyenze njengoko kufanelekile kodwa, ukuba nangasiphi na isizathu ayinakwenzeka nangayiphi na indlela, singasoloko siyenza ukusuka kukhetho olwenzelwe yona.
Uyenza njani into eya kwahluka ngokuxhomekeke kubume bomzobo esiwusebenzisayo. Kwinguqulelo ye-GNOME esebenzisa Ubuntu, konke okufuneka ukwenze kukulandela la manyathelo:
Sinqakraza kwi-tray yenkqubo. Liqela leempawu ezibonakalayo phezulu ekunene, apho sibona khona ivolumu kunye ne icon yenethiwekhi.
Sihambisa isilayida okanye umtyibilikisi enomfanekiso welanga onesiqingatha esimhlophe nesiqingatha esimnyama. Ukutyibilika ngasekhohlo kuya kuthoba ukuqaqamba, ngelixa utyibilika ngasekunene siza kuyonyusa.
Kwezinye izibonelelo ezinje ngeKubuntu, zihlala zifana itreyi yenkqubo, ngomahluko oya kuba kwinxalenye esezantsi ekunene. Ukuba i icon yebhetri ayiveli, iya kuba kungenxa yokuba siyisusile kuseto. Kwimeko engenakwenzeka yokuba inkqubo yokusebenza ayiyivumeli ukusuka kwitreyi yenkqubo, eyona nto iqhelekileyo kukuba kukho ukhetho kwiisetingi / kuqwalaselo lwenkqubo yokusebenza kwenkqubo.
Jonga ubushushu bekhompyuter yakho ngomyalelo 'woluvo'
Yandisa okanye unciphise ukuqaqamba ngekhibhodi
Iilaptops zanamhlanje ziza neekhibhodi ezahlukeneyo kunokuba zazisetyenziswa kumashumi eminyaka eyadlulayo. Kudala-dala, iibhodi yezitshixo zazilula kwaye zingabandakanyi iibhodi yezitshixo. Fn okanye amaqhosha omsebenzi, ekubeni kuphela yi-F1, F2, F3, njl.njl. I-brand nganye isebenzisa amaqhosha ahlukeneyo ukwenza isenzo esifanayo, kodwa namhlanje sinokunyusa kwaye sinciphise ivolumu kwikhibhodi, cima imouse, sitshintshe phakathi kweliso okanye, siphakamise kwaye sinciphise ukukhanya. Nantso ke indlela eyilelwe kwaye injalo.
Sinezinto ezimbini onokukhetha kuzo:
Isebenza ngokuthe ngqo, Zelaphu. Kule meko, ukucinezela kwizinto eziqhelekileyo zelanga, elinye ligcwalisiwe kwaye elinye lingenanto, kuyonyusa okanye kunciphise ukuqaqamba. Lowo ngasekhohlo uya kuyithoba kwaye osekunene uya kuyiphakamisa.
Ayisebenzi ngokuthe ngqo. Kule meko kukho ezinye iindlela ezimbini: eyokuqala kukuba asinakuyenza ngekhibhodi kwaye okwesibini kukuba kufuneka sicinezele iqhosha le-Fn ngaphambi kokucinezela ukwanda kokuqaqamba / ukunciphisa amaqhosha.
Akunakufane sikhubeke kwityala lesibini. Iikhompyuter sele zifikile nezitshixo zomsebenzi ezenziwa zasebenza ngokungagqibekanga. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka ungene kwi-BIOS (ihlala i-F2 okanye i-Fn + F2 xa uvula ikhompyuter), jonga ii "Function Keys" kwaye ujonge ukuba ithi "Yenziwe ukuba isebenze" (Yenziwe yasebenza). Ukuba ayisiyiyo, siyenza isebenze kwaye siphume ukugcina utshintsho.
Enye inketho yenza eyethu indlela emfutshane, kodwa oku ngekhe kufumaneke ku-Ubuntu. Ewe singayenza kwezinye iinkqubo ezenziwa ngokwezifiso ezinje ngeKubuntu kwaye sinokwenza indlela emfutshane enqumlayo ngokujonga "Ukukhetha" kukhetho lokufikelela kwiindlela ezimfutshane / iindlela ezimfutshane zekhibhodi / Ulawulo lwamandla. Ngakwesokudla, ukhetho "Yandisa ukukhanya kwesikrini" kwaye "Nciphisa ukukhanya kwesikrini" kuya kuvela. Kufuneka nje ucofe into ibe nye, phawula u "Custom" kwaye ubonise indlela emfutshane yezitshixo emva kokucofa u "Akukho".
Ngaba sowuyayazi indlela yokwandisa kunye nokunciphisa ukuqaqamba kwePC yakho Ubuntu?
Hlela iiwindows zakho nge-X-tile
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » ngokubanzi » Linux » Ukulungisa ukukhanya kwesikrini kunye neXbacklight
Njengobambiswano ndishiya apha amanyathelo athile asebenzele ukutshintsha ukukhanya kwelaptop yam kwisoftware kwaye ndisebenzise onke amaqhosha abelweyo (Fn), ndisebenzisa i-Samsung RV408 ene-Intel kunye ne-KDE:
Isudo kate / njl / emiselweyo / grub
Khangela imigca uze uyiguqule okanye uyongeze:
acpi_osi = I-Linux
acpi_backlight = umthengisi
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT = "cwaka cpi acpi_osi = Linux acpi_backlight = umthengisi"
Gcina kwaye uvale uKate.
Ukongeza, i-Samsung icetyiswa ukuba ifake izixhobo ze-Samsung:
Isongezo sudo-apt-yokugcina ippa: voria / ppa
Sudo apt-fumana uhlaziyo && sudo apt-fumana uhlaziyo
Sudo apt-fumana ukufaka izixhobo zesamsung
Sudo apt-fumana ukufaka isamsung-backlight
URafa Barron sitsho
Akandihoyi. Ngaba kungenxa yokuba ndifakelwe umqhubi we-nvidia? Oku kulunge ngakumbi kunokwenza useto kwi-nvidia's GUI yakho ewe.
Phendula kuRafa Barron
UAndres Cordova sitsho
Mhle! Enkosi undigcinile ndine-Toshiba P850 ene-Ubuntu 12.10 kwaye andikwazi ukuphatha ukukhanya kunye namaqhosha aqhelekileyo. Ndiyabulela kakhulu.
Phendula uAndres Cordova
UmJamani Alberto Ferrari sitsho
Enkosi kakhulu, isebenza ngokugqibeleleyo kwi-Acer Aspire 7720Z ene-Ubuntu 12.04.
Phendula kuGermán Alberto Ferrari
Into ebendiyifuna. Ndiyabulela kakhulu!
URamon Nieto sitsho
Undinika lo myalezo: Akukho ziphumo zinepropathi ekhanyayo
Phendula kuRamón Nieto
Molo, andinakwenza umsebenzi osisitshixo we-Fn, kwaye, ngaphantsi kokulawula ukukhanya, i-xbacklight okanye ityala, ndizamile ukuguqula i-grub kwaye andinaLubunto 15.04 kwaye umatshini wam yiNotebook Hp pavillion dv 6000 AMD Turion 64 × 2 .. umntu ucebisa into ??
Ijelo alaziwa sitsho
Mholo. Ndiyifakile kwi-PC ngomyalelo: Sudo aptitude install xbacklight.
Kodwa xa usenza, umzekelo: xbacklight -set 80
Kuyandiphosa oku: "Akukho ziphumo zinepropathi ekhanyayo."
Kudala ndisebenzisa lo myalelo umz: xgamma -gamma 0.600. Kodwa, nangona kunciphisa ukuqaqamba, ayifezekanga, kuba izinto ezahlukeneyo kwidesktop nakwiiwebhu (ex: iibhena) zihlala ziqaqambile.
Phendula kwijelo elingaziwayo
U-Lucas Alejandro Ramela sitsho
Phendula uLucas Alejandro Ramela
Ilula, iyafundisa, kulula ukuyisebenzisa….
Sneider Gaviria sitsho
Isebenze ngokugqibeleleyo kum, enkosi kakhulu, usindise nje amehlo am, bendikhangela indlela yokwenza ngayo unyaka we-1, enkosi engapheliyo
Phendula uSneider Gaviria
Ngaba umatshini wakho we-Virtualbox uyekile ukusebenza? Zama oku
I-Linux Mint iya kushiya i-32bits iqala ngeLinux Mint 20